पृथ्वी राजमार्ग बनेको पुगनपुग दुई दशक भएपछि सिम्टार गाउँमा बसीगरी खानेमेलो हराएका मनमाया र बलबिरको जोडी तल राजमार्ग झरे । तिनले जानेको शीप केहि थिएन । न आफन्त न Cisco 642-902 dumps चिनजान । कुनै उद्योग गरि जोरजाम गरेको सात आठसय रुपैँया र पाँच बर्षकी छोरी ऊषा नै तिनको सबथोक थियो ।
मनमाया र बलबिरले फूर्के खोलाको किनारा छेऊमा झुपडिका लाईनमा एऊटा अर्को थपे र जीवनलाई राजमार्गमा चल्ने सयौं गाडीसँगै चलाउने सपना बुने । ऊनको चियानास्ता, खानापिनाको पसल सोचेजस्तो चल्न भने सकेन । मनमाया अब्बल दर्जाको 'कुक' थिईनन् र नमीठै पकाउने पनि होईनन् तर हुटेलको भीडमा आक्कल झुक्कल आऊनेको प्रतिक्रिया पनि राम्रो थिएन ।http://www.kingdumps.com
'चियामा स्वादै छैन ।' रमाकान्त बाजेहरु भन्थे ।
'चाऊचाऊ हो की सिन्का पका'को?' बालुवाका दलाल कुर्लन्थे ।
'यस्तो भात खान अब चैं आईन्न ।' मनकामना माताको जय लेखिएका ट्रक चलाऊने ड्राईभर घुर्क्याउंथे ।
'कस्तो रक्सी यो; पानी मिसाको छ जस्तो ?' बिजुलीपानी खान आउने ठुस्कन्थे ।
आफ्नो हुटेल चल्न नसक्ने देखेपछि CCIE 350-001 'साईड बिजनेस' थाले तिनले । बलबिर बालुवा धुने, मनमाया गिट्टि कुट्ने । जीवन त्यो समय काठमान्डु भक्तपुर चल्ने ट्रलीबस जस्तै भयो । फूकेखोलाको साक्षी बसेर ती दुईले धेरै दुःख र थौरै सुख काटे । मकालुको बस बनेर समय दौडिरह्यो । ति मर्न सकेनन्, न जीवन बाँचेजस्तो नै थियो ।
छोरी ऊषा चौधकी भई । नचले पनि तिनले हुटेल छाडेका थिएनन् । छोरीले पढे जस्तो गर्थी । आठ पास गरेर आमालाई चिया नास्तामा सघाउन थाली । CompTIA sy0-301 dumps बिस्तारै मनमायाको हुटेल चल्न थाल्यो । जोईपोईले साईड बिजनेस पनि छाडे । ग्राहकहरु थपिए । सबैले सबै मीठा राम्रा देखे ।
रमाकान्त बाजेहरुले चिया मीठो माने ।
चाउचाऊ बेजोडको मानिन थालियो ।
भात खान आऊने गुरुजीका लर्को देखियो ।
अलिकति खाँदैमा रक्सीमा मात भेटियो ।
मनमायालाई यति मीठा खानेकुरा पकाउन सिपालु भन्दै सबैले सह्रनी गरे । उनलाई लाग्यो 'एउटा टीपर छिट्टै किन्नेछु अब ।'
टेष्टमा फेल भएपछि ऊषाले पढ्ने जाँगर देखाईन । माईक्रो चलाऊने एऊटा ठिटोसँग पिरेम थियो क्यार, एकदिन भगायो उसले । मनमायाले ननिको मानिनन् । 'जाने जात गई' उनले यसै भनिन् । थपमा ऊनको हुटेल पनि दौडिन थालेको थियो ।
छोरी हिडेको पन्ध्रदिन नपुग्दै मनमायाका ग्राहक पातलिन थाले ।
रमाकान्त बाजेहरु फेरी कुर्लिए, 'यस्तो पनि चिया?'
मनमायाले बुझिनन्, उहि चिनी-पत्ति, मर-मसला, चामल,Cisco CCNA 200-120 exam भान्छे, शीप हुँदापनि ऊनले पकाएको नमीठो, मीठो र फेरि नमीठो किन भयो?
True story of highway....
mero maan choyo...